एयर एसियाको विमानभित्र सिटमै मृत भेटिए रोक्कामगर ! | EuropeNepal.Net
एयर एसियाको विमानभित्र सिटमै मृत भेटिए रोक्कामगर !
00Europe Nepal Wednesday, May 27, 2015
found died rokka magar in airasia air
मलेसियाबाट एयर एसिया विमानको उडानमा काठमाण्डु आउँदै गरेका एक यात्रु मंगलबार सिटमै मृत फेला परेका छन् । मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरबाट काठमाण्डु आउँदै गरेका प्युठान जिल्ला राम्दी– १ का ३७ वर्षीय गोबिन्दबहादुर रोकामगर मृत फेला परेका हुन् ।
एयर एसियाको प्लेन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेलगत्तै मगर मृत फेला परेको प्रहरीले बताएको छ । रोक्काको शव उनको आफन्तलाई खबर गरी काठमाण्डु मेडिकल कलेजमा पठाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
EuropeNepal.Net: एयर एसियाको विमानभित्र सिटमै मृत भेटिए रोक्कामगर !